Linux kernel 5.8 ga-abịa na ọtụtụ mgbanwe na RC1 dị ugbu a | Site na Linux
Linus Torvalds gosipụtara RC nke mbụ na nso nso a (Hapụ nwa akwukwo) maka nsụgharị Linux Kernel 5.8 na na ad kwuru na ọ ga-abụ nke kachasị ukwuu onye obula banyere oru nile nke oru ngo.
Ma ọ bụ na Linux Kernel 5.8, Anabatara usoro mgbanwe 14,206, que emetụta ihe dị ka 20% nke faịlụ niile dị na nchekwa nwere kernel code. Nha nke 5.8-rc1 patch bụ 61 MB, nke dị ihe dịka 35% buru ibu karịa 5.7 patch sitere.
Yabụ na anaghị m atụ anya nke a, mana 5.8 dị ka ọ bụ otu n'ime nnukwu mbipụta anyị niile oge.
Dị ka nke -rc1, ọ na-adịgide ruo v4.9, nke dịgoro oge ịhapụ anyị kachasị ukwuu site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ịmejọ. Ee, 5.8-rc1 nwere di na nwunye pere mpe karịa 4.9-rc1, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ụdị zuru ezu karị.
Ihe nkpuchi 4.9 bu nke aka ya buru ibu n'ihi uzo nke greybus nke jikọtara na nhapụ ahụ, kamakwa n'ihi na v4.8 enweela usoro rc toro ogologo ma si otú a nwekwuo mmepe nke mmepe. Na 5.8, anyị enweghị akara ọ bụla nke ụdị okwu ahụ na-eme ka ntọhapụ buru ibu, enwere ọtụtụ mmepe ebe ahụ.
Na ngụkọta, nke mgbanwe ndị emere na nsụgharị ọhụrụ a, 15234 faịlụ emetụta, Ejiri akara 1026178 nke koodu agbakwunyere, ewepụrụ ahịrị 480891 (n'iji ya tụnyere akara 570560 na ngalaba 5.7 wepụrụ akara 297401).
Ihe dị ka 37% nke mgbanwe niile egosi na 5.8 metụtara ndị ọkwọ ụgbọala, ihe dị ka 16% nke mgbanwe ndị ahụ metụtara imelite koodu a kapịrị ọnụ nke akụrụngwa ngwaike, 10% jikọtara ya na ntaneti ntanetị, 3% na sistemụ faịlụ yana 4% na sel kernel dị n'ime.
Achọpụtala na a chọtala cores nwere nnukwu patch na mbụ, mana mgbanwe ndị a na-etinyekarịkarị na otu sistemu ma ọ bụ kpatara mgbakwunye nke nnukwu data data (dịka ọmụmaatụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nwere nkọwa nkọwa na kernel 4.12 maka ọkwọ ụgbọala AMD GPU na kernel 2.6.29, akụkụ ka ukwuu nke ndị ọkwọ ụgbọala ọhụrụ agbakwunyere na ngalaba nkwadebe).
Isi nke Linux 5.8 ama ama na enwere ọtụtụ mgbanwe na ya (n'usoro nke ọnụọgụ nke ọnụọgụ na ọnụọgụ nke akara agbakwunyere) ma gbasaa n'ofe usoro dị iche iche.
Imirikiti mgbanwe ndị a na-ekpuchi ndị ọkwọ ụgbọala na ọtụtụ mgbanwe metụtara mgbanwe ndị bụ isi na ihicha na usoro ndị isi, yana mmepe nke nkwalite ngwaike akọwapụtara nke ọma. Ọ bụghị na-enweghị mbipụta akpaka metụtara imelite ozi ikike na usoro SPDX, mana mbipụta ndị a abụghị ndị na-achị achị ma na-egosipụta ọrụ ndị ọzọ na mmepe.
Ọ bara uru na-agbanyeghị na nha ya, ọ dịchaghị ka ọ dị nsụgharị na-enye nsogbu karịsịa, ọbụlagodi ugbu a.
Ee, oke nha mere ka windo a jikọtara ọnụ dị ntakịrị karịa m chọrọ, n'ihi na achọrọ m ịnwe ụbọchị ole na ole na njedebe na njedebe iji hụ ụfọdụ arịrịọ na-adọrọ adọrọ.
Oge a nke na emebeghị n'ezie. Mana enwere m naanị arịrịọ abụọ m dọtara na m mechara chọọ ịmatakwu, yabụ ihe niile gara nke ọma. - Linus Torvalds kwuru.
O kwukwara nke ahụ n'ezie, ọ bụ ezie Kernel 5.8-rc1 bụ "na par na nke kacha mma" n'ihe banyere ma ọnụ ọgụgụ nke nkwenye na ọnụ ọgụgụ nke akara ọhụrụ, ọ bụ n'ezie pụtara ìhè onye mmeri na usoro nke ọnụ ọgụgụ nke ndị gbanwetụrụ faịlụ.
Yọzọ na nke ahụ abụghị n'ihi a mfe edemede ofụri osisi
(ndụ ndị nwere ọtụtụ mgbanwe na akara ikike SPDX nwere ọtụtụ faịlụ ndị gbanwere), ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị n'ihi ọtụtụ ọrụ mmepe.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, can nwere ike ịlele nkọwa na njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Linux kernel 5.8 ga-abịa na ọtụtụ mgbanwe na RC1 dị ugbu a
Lampone Pi: a RaspbianOS na Live ọnọdụ